राष्ट्र बैंकसँगको बैठकपछि सहमति, ब्याजदरको सीमा निर्धारण - Everest Dainik - News from Nepal
राष्ट्र बैंकसँगको बैठकपछि सहमति, ब्याजदरको सीमा निर्धारण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको बैठकपछि नेपाल बैंकर संघले व्याजदरको सीमा तोकेको छ । पहिले तोकिएको सीमा केही समयको लागि फुकुवा गर्दा व्याजदर बढाउनेहरुबीच होडबाजी चल्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको आग्रहमा बैंकरसंघले फेरि व्याजदरको सीमा तोकेको हो ।
पुँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्नको लागि बनेको कार्यदलले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यो सुझाव अनुसार कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल गर्न बैंकले २८ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई राष्ट्र बैंकमा बोलाएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस भारतमा घट्यो ब्याजदर, नेपालका बैंकले पनि घटाउलान् ?
बैठकमा अहिले व्याजदरमा देखिएको होडवाजी अन्त्य गर्नको लागि बैंकहरुलाई सुझाव दिईएको नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख नारायण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बैठकमा गवर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाल, डेपुटी गभर्नरहरु चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठको समेत उपस्थिती रहेको थियो । सोही बैठक सकिए लगत्तै बैंकर्स संघ फेरि भद्र सहमति गरेको हो ।
बैंकर संघका अनुसार बैंकहरुबीच व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको मुद्दति खातामा ९.२५ प्रतिशत व्याजदरको सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै, संस्थागत मुद्दति तर्फ साढे ८प्रतिशत व्याजदर सीमा तोकिएको छ । व्यक्तिगत तर्फ ० दशमलव ५ प्रतिशत सम्म व्याजदर बढाउन सक्ने र संस्थागत तर्फ १ प्रतिशतसम्म व्याजदर बढाउन सक्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । बैंकर संघको यो निर्णय शुक्रबारदेखि लागू हुनेछ ।
उता, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने सिसिडी रेसियो नाघेका बैंकहरुलाई पनि एक पटकको लागि कारबाही नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
ट्याग्स: Banker's Association, Interest rate